ကရင်ပြည်နယ်တွင် ကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၃၅၂ သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ မော်တော်ယာဉ်ထုတ် စက်ရုံ အိန္ဒိယအ? - Yangon Media Group
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ စက်ရုံတစ်ရုံအား တွေ့ရစဉ်။
ကရင်ပြည်နယ်တွင်မော်တော်ယာဉ်တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချမည့်စက်ရုံကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၃၅၂ သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှတည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
အဆိုပါစက်ရုံကို ကရင် ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်ရှိ မြဝတီ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးစက်မှုဇုန် ကွင်းအမှတ်(၃)တွင် တည်ဆောက်ကာ မော်တော်ယာဉ်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်ဝင်းထွန်းက ”အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာတော့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း ကရင်ပြည်နယ်မှာ ခွင့်ပြုပေးတာ ဒါကပထမဆုံးပါပဲ။ အရင်ကလုပ်ငန်းသုံးခုကိုတော့ ခွင့်ပြုပေးထားတယ်။ အဲဒါက ပြည်တွင်း ဈေးကွက်အတွက်လို့ ထင်ပါ တယ်။ ဘာ brand လဲဆိုတာကတော့မသိပါဘူး”ဟု မေ ၃၁ ရက်က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၌ ကျင်း ပပြုလုပ်သည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။
ကရင်ပြည်နယ်တွင် ၁၉၈၈ – ၁၉၈၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းသုံးခု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂၈ ဒသမ ၂ သန်းခွင့်ပြုပေးထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၌ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာ ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာ နှစ်အထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း ၂၆ ခု အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၄၃ ဒသမ ၆၄၂ သန်းခွင့်ပြုပေးခဲ့ကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဆင့်အနေဖြင့် အဆင့်တစ်ဆယ်တွင်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တရားဝင် တင်သွင်းရန် မြဝတီ၌ လပေါင်းများစွာ စောင့်ဆိုင်းနေသော ယာဉ်များကို စစ်ဆေးမှု ရပ်ဆိုင်??
မြန်မာ - ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံပိုင် မယ်ဆိုင် - မယ်ဟောက်ချောင်း နယ်နိမိတ်တစ်လျှောက်ရှိ ကျူးကျော??
မြန်မာနိုင်ငံက ဘင်္ဂါလီကိစ္စ အတွက် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ စစ်ဆေးမှုကို လက်ခံ